မောင်စိုးချိန် | MoeMaKa Burmese News & Media
>Maung Lwan Ni - Sugar coated troubles (17)
Posts Tagged ‘ မောင်စိုးချိန် ’
မောင်စိုးချိန် – ကျောကုန်း ခြေထောက် ပန်းပွင့်များ
မောင်စိုးချိန် – ကျောကုန်း ခြေထောက် ပန်းပွင့်များ ( တက်ကြွ တိုးတက်သော ဗ-က-သ ကျောင်းသားများနှင့် လူငယ်များသို့ ) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ရှေးသရောခါ ဘုရင်ကြီးဒေးဗစ်...
မောင်စိုးချိန် – နေ၀န်း ခွပ်ဒေါင်း အလံများနှင့်အတူ ….
မောင်စိုးချိန် – နေ၀န်း ခွပ်ဒေါင်း အလံများနှင့်အတူ …. (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄ လူတွေ လူထုတွေ အရှင်လတ်လတ် သားကောင်ဘ၀ရောက် အနည်းဆုံးကျွန်အဖြစ်ခုိုင်းဖို့ခုိုင်းရာနေ စေရာသွား ကျွဲနွားဖြစ်ဖို...
မောင်စိုးချိန် – မင်းလောင်းဘယ်သူလဲ
မောင်စိုးချိန် – မင်းလောင်းဘယ်သူလဲ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၄ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးဆယ် လေးဆယ်ကျော်က မျှော်တ ခဲ့ဘူးရဲ ။့ အမှောင်ခေတ်ကို တွန်းဖွင့် ထွန်းသစ်အာရုဏ်ဦး မျှော်ဖူးကြိုလင့်ခဲ့။ အမှောင်ခေတ်ပျက် မြို...
Maung Soe Chein – ပဋိပက္ခ
ပဋိပက္ခ (ပြုပြင်ရေးနဲ့ တော်လှန်ရေးအကြားမှာ) မောင်စိုးချိန်၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၄ အိမ် စိုးရိမ်အမှတ်ထက် မြင့်တက် တံခါးရွက် ခြတက် ဆွေးကွာ ဘေးအကာထရံ လေအထန် တဖျတ်ဖျတ်လန်ပြီး ငိုညည်း တိုးတီးငိုကြွေး ရိဆွေးခေါင်မိုး...
keith Vaughan အစိမ်းစားသတ္တဝါများနဲ့ ကဗျာဆရာတချို့ မောင်စုိုးချိန် ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၄ ပဲပြောင်းဆန်စပါး တန်ပေါင်းများစွာစားတယ် ထွက်ကုန်မှန်သမျှ ကျွှန်းပျဉ်းကတိုး အင် ကညင် သစ်လုံးတွေကို မြိုချတယ် တန်ပေါင်းများစွာ...